भागेकी घरेलु कामदार भेट्नेलाई १३ लाख पुरस्कार
काठमाडौं, साउदी अरबको एक परिवारले आफ्नो घरबाट बेपत्ता भएकी एक फिलिपिनो घरेलु कामदारका बारेमा जानकारी दिने व्यक्तिलाई झण्डै १३ लाख ५० हजार बरावरको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
प्लोमा पन्ता ताग्काला नाम गरेकी ति महिला कामदारले सो परिवारलाई खानामा बिष हालेर खुवाएर आफ्नो प्रेमिसाग भागेको बताइएको छ । ति फिलिपिनो महिलाका प्रेमि ति महिला काम गर्ने घरको छिमेकी भएको बरुवा डटकमले खवर लेखेको छ ।
नोहा अल जमा
के यसले खाडीका देशमा कामदार माथि भइरहेको अन्याय रोक्ला ?
रियाद, साउदी अरबको श्रम मन्त्रालयले कामदारलाई बिनाकारण जथाभावि सारिरहन बन्देज लगाएको छ । मन्त्रालयले हालै श्रम कानूनमा गरिएको फेरवदलले रोजगारदाता र कामदार दुवैको सुरक्षा गर्ने भन्दै यसले काम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउने र सम्झौता पत्र अनुरुप काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुने दावी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अव रोजगारदाताले कामदारलाई तलव दिने दिन आफूखुसी फेर्न पाउने छैनन् । मासिक रुपमा तलव दिइरहेको अ
थाहै नपाई लागु औषध दुवई ल्याउँदा ...
दुवई, विमानस्थलमा कसैले मेरो आफन्तलाई दिनु है भन्दै दिएको पोको समात्नुको मूल्य कति महंगो पर्न सक्छ ? दुवईमा एक महिला अहिले त्यहि मूल्य चुकाउँदै छिन् ।
ताजकिस्तानकी ३३ बर्षिय एक महिला एक किलो हेरोइन र ५९ थान मेथाडोन नामको क्याप्सुल सहित दुवईको एयरपोर्टमा पक्राउ परिन् । उनको झोलाबाट सो सामग्री बरामद भएपछि उनलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राखेको छ । पर्यटकको भिसामा दुवई आइपुगेकी ति महिलाको नाम गोप्य
भारतमा बेचिएकी महिलाको स्वदेश फर्किएपछि मृत्यु
देशपरदेश, हेटौंडा, आफ्नै आमाजुबाट भारतको कोलकातास्थित बेश्यालयमा बेचिएकी मकवानपुरकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बेश्यालयबाट अशक्त अवस्थामा पाँच बर्षपछि फिर्ता भएकी महिलाको मृत्यु भएको हो । २८ बर्षिया उनलाइ २०६६ असारमा आमाजु सावित्री तथा उनका श्रीमान् राजु घिमीरेले वेश्यालयमा लगेर बिक्री गरेका थिए ।
रक्सौलबाट लठ्याउने औषधि खुवाएर बेश्यालयमा लगेर उनलाई बिक्री गरिएको दाबी गरिएको थियो । कोठी सञ्चालकले
जो एकसय डलरको नक्कली नोटको फन्दामा परे युएईमा
दुवई, ट्रान्जिट भिसामा ३ दिनका लागि दुबई आएका एक व्यक्तिले झन्डै ३ महिना देखि यहाँको कानुनी चक्कर काटिरहेका छन् । परिवार सहित दुबई घुम्न आइपुगेका उनी आफुसंग भएको एक नक्कली नोटका कारण कानुनी फन्दामा परेका हुन् । यहि चक्करमा परेर उनले ७५ दिन युएईमै वितिसकेको छ ।
गल्फ न्यूजका अनुसार ३६ बर्षिय पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद ओमार शेख आफ्नी पत्नी र चार वर्षीया छोराका साथमा गत सेप्टेम्बरमा दुबई हुँदै मदागास्क
पासपोर्ट हराउँदा नेपाल फिर्ता
मलेसिया, मलेशिया केलाङ स्थित साम्सुङ कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरु कम्पनीको लापरबाहीले पासपोर्ट हराएको कारण बिचमा नै खाली हात नेपाल फिर्ता हुनु परेकोछ ।
पासपोर्ट हराए पछि करार अवधि नसकिएता पनि स्वदेश फर्कनु पर्ने बाध्यतामा परिएको कम्पनीमा कार्यरत बताउँछन। करार अबधि ३ बर्षको भएपनि २ बर्ष अघि नै फिर्ता हुनु परेकोछ । त्यहाँ कार्यरत श्रमिक बिरामी भएर फिर्ता हुनुपर्दा करार अबधिको लेभी पुरा बुझाउनु
नेपालबाट दुवई जान हिंडेकी उनी कहाँ हराइन् ?
दुवई, नेपालबाट युएईको दुवईमा रोजगारीका लागि हिंडेकी एक महिला सम्पर्क विहिन भएकी छिन् । दुवईमा क्यारिफोरमा रोजगारी दिलाउने भन्दै नेपालकै एक दलालले काठमाडौं विमानस्थलसम्म पुर्याएकी गुल्मी अर्खलेकी ३१ बर्षकी गीता खनाल सम्पर्क विहिन भएकी हुन् ।
गत कात्तिक ६ गते उनलाई दलालले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थलसम्म पुर्याएको जानकारी गीताका आफन्तहरुले पाएका छन् । युएईको दुवईमा कार्यरत गीताकी दिदि त
साउदी अरबमा 'राम' नाम राख्न प्रतिवन्ध (हेर्नुहोस् प्रतिवन्धित ५० वटा नामको सूची सहित)
रियाद, साउदी अरब सरकारले ५० वटा नामहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धित नामहरुमा शाही परिवार, ईस्लाम धर्म र केही बिदेशी भाषा र धर्मसँग सम्बन्धित नाम रहेका छन ।
धार्मिक नामसँग जोडीएका केही नामहरु जस्तै अमीर, लिन्डा, अब्दुल नाबी नामहरु लेख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजतन्त्रसँग जोडिएका केही नामहरु जस्तै मालिका, मालेक, सुमुव, माम्लाका जस्ता शब्दहरु पनि प्रतिबन्धमा परेका छन । त्यस्तै प्रतिबन्धित नामको
साउदीमा कम्पनीले जवर्जस्ती काममा लगाउँदा एक नेपालीको मृत्यु
श्रीमतिबाट पीडित भएका बैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरु(भिडियो सहित)